Anopa Mubayiro Vane Kutenda (VaHebheru 11:6) | Swedera Pedyo naMwari
Nharireyomurindi | November 2013
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Jehovha anokoshesa here zvinoitwa nevanamati vake vachiedza kumufadza? Vamwe vangati kwete, vachiti Mwari haana basa nesu. Asi kutaura nenzira yakadai inhema dzakaipa nezvaMwari. Shoko rake, Bhaibheri rinotiudza chokwadi nezvake. Rinotiudza kuti Jehovha anoonga chaizvo zvinoitwa nevanamati vake vakatendeka. Chimbofunga nezvemashoko emuapostora Pauro ari pana VaHebheru 11:6.
Chii chinodiwa kuti tifadze Jehovha? Pauro akanyora kuti, “Pasina kutenda hazvibviri kunyatsomufadza [Mwari].” Ona kuti pano Pauro haana kuti zvakaoma kufadza Mwari kana tisina kutenda. Asi, akati hazvibviri kuti timufadze. Izvi zvinoratidza kuti tinofanira kuva nokutenda kana tichida kufadza Mwari.
Jehovha anofadzwa nokutenda kwerudzii? Kutenda kwedu muna Mwari kunofanira kuva nezvinhu zviviri. Chokutanga, tinofanira “kutenda kuti ariko.” Zvechokwadi hazviiti kuti tifadze Mwari kana tisina chokwadi chokuti ariko. Asiwo, kutenda kwechokwadi kunopfuura kungobvuma kuti Jehovha ariko, nekuti madhimoni anotendawo kuti Jehovha ariko. (Jakobho 2:19) Kutenda kwedu kuti Mwari ariko kunofanira kuita kuti tiite chimwe chinhu, kureva kuti tinofanira kurarama nenzira inofadza Mwari.—Jakobho 2:20, 26.
Chechipiri, tinofanira “kutenda kuti” Mwari “anopa mubayiro.” Munhu ane kutenda kwechokwadi anonyatsovimba kuti kana akararama achifadza Mwari, anenge asingatambisi nguva. (1 VaKorinde 15:58) Zvingaita here kuti tifadze Jehovha kana tisina chokwadi chokuti anogona uye anoda kutipa mubayiro? (Jakobho 1:17; 1 Petro 5:7) Munhu anoti Mwari haana hanya, haaongi uye haana rupo, haazivi Mwari anotaurwa muBhaibheri.
Ndivanaani vanopiwa mubayiro naJehovha? Pauro anoti, “Vaya vanomutsvaka nomwoyo wose.” Rimwe duramazwi revashanduri veBhaibheri rinotaura kuti shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “vanomutsvaka nomwoyo wose,” harirevi “kungotsvaka,” asi rinopa pfungwa yokushanda nesimba kuti “unamate” Mwari. Rimwewo duramazwi rinotsanangura kuti manyorerwo akaitwa shoko rechiito iri rechiGiriki anopa pfungwa yokushanda nesimba uye kuzvipira nomwoyo wose. Zvechokwadi, Jehovha anopa mubayiro avo vane kutenda kunovaita kuti vamunamate vachimuda nomwoyo wose uye vachishingaira.—Mateu 22:37.
Tingafadza sei Jehovha kana tisina chokwadi chokuti anogona uye anoda kutipa mubayiro?
Jehovha anopa sei mubayiro vanamati vake vakatendeka? Akavimbisa kuti achavapa mubayiro wakanaka zvikuru woupenyu husingaperi muParadhiso pasi pano, zvichinyatsoratidza kukura kwakaita rudo rwake uye rupo. (Zvakazarurwa 21:3, 4) Kunyange iye zvino, vaya vanotsvaka Jehovha nomwoyo wose vanokomborerwa zvikuru. Vanobatsirwa nemudzimu mutsvene waMwari uye neuchenjeri huri muShoko rake, kuti vave noupenyu hunogutsa.—Pisarema 144:15; Mateu 5:3.
Chokwadi, Jehovha ndiMwari anoonga uye anofarira basa rinoitwa nevashumiri vake vakazvipira uye vakatendeka. Kuziva izvi kunoita kuti ude kuswedera pedyo naye here? Kana zvakadaro, wadii kudzidza zvimwe zvaungaita kuti uve nokutenda kuchaita kuti Jehovha akukomborere zvikuru?
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna November
Tito 1-3; Firimoni 1-25; VaHebheru 1-13–Jakobho 1-5
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose”
NYAYA IRI PAKAVHA Zvii Zvinotadzisa Vamwe Kuda Mwari?
NYAYA IRI PAKAVHA Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Haana Zita
NYAYA IRI PAKAVHA Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Haanzwisisiki
NYAYA IRI PAKAVHA Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Ane Utsinye
NYAYA IRI PAKAVHA Chokwadi Chinogona Kukusunungura
MAZANO EKUTI MHURI IFARE Taura Nemwana Wako Achiri Kuyaruka—Musingaitisani Nharo
SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA “Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose”
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO Akanzi “Akarurama Nemabasa”
Munofunga Kuti Ndimi Mune Chitendero Chechokwadi Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Nhema Dzinoita Kuti Vanhu Vasada Mwari
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Nhema Dzinoita Kuti Vanhu Vasada Mwari
Nhema Dzinoita Kuti Vanhu Vasada Mwari
NHARIREYOMURINDI Nhema Dzinoita Kuti Vanhu Vasada Mwari
‘Anonyatsooneka Zvaari Pazvinhu Zvakasikwa’